फिचर | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal
तस्विरमा हेर्नुहोस म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको २० औं क्याम्पस सभा तथा ११ औं अधिवेशन
विकल्प न्यूज/बेनी पुस १८ गते । म्याग्दीको बेनीमा रहेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको आइतबार २० औं क्याम्पस सभा तथा ११ औं अधिवशेनको उदघाटन सत्र सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्र बहादुर थापाले सभाको उदघाटन गर्नुभएको हो । सभाको उदघाटन गर्नुहुँदै सांसाद थापाले जिल्लाको शैक्षिक विकासका लागि क्याम्पसले खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्नुभएको छ । उहाँले सवैको सामुहिक […]
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न मंंगलामा सकस (फोटो फिचर)
विकल्प न्यूज/बेनी पुस ८ गते । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न मंगलाका सर्वसाधरणहरु राती सम्म बस्नुपरेको छ । निर्वाचन कार्यालय म्याग्दीले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली संकलन अभियान अन्तर्गत मंगला गाउँपालिकामा बुधवार र विहिवार गाउँगाउँबाट आएका सर्वसाधरणहरुले नामावली दर्ता गर्न राती १० बजे सम्म बस्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नका लागि […]
वरीपरी हिउँले घेरिएको मुस्ताङको ढुम्बा ताल(फोटो कथा)
ठाकुरप्रसाद आचार्य/मुस्ताङ पुस ४ गते । वरीपरि रहेका निलगिरि हिमाल,धौलागिरि,मानापाथी लगायतका हिमश्रृङ्खलाको मनोरम दृश्य । अनि ढुम्बा ताल ! मुक्तिनाथ पुग्ने पर्यटक चिसो मौसमको प्रवाह नगरी घरपझोङ गाउँपालिका ५ स्थित ढुम्बा ताल पुग्छन् । जोमसोमबजारबाट १५ मिनेटमा यहाँ पुग्न सकिन्छ । ताल सम्म पुग्नका लागि सडक निर्माण गरिएको छ । ढुम्बा तालमा पुग्ने पर्यटकले […]
पर्यटकीय स्थल टोड्केमा म्याग्दी मिडिया सोसाइटीको अधिवेशन सम्पन्न (फोटोफिचर)
विकल्प न्यूज/बेनी मंसिर २४ गते । म्याग्दीको पर्यटकीय स्थल टोड्केमा म्याग्दी मिडिया सोसाइटीको पाँचौं साधरणसभा तथा तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । शुक्रकार टोड्के स्थित टोड्के हिल रिसोर्टमा सम्पन्न संस्थाको अधिवेशनले पुन कमल खत्रीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा हरिकृष्ण गौतम,सचिव अमित विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद आचार्य,सहसचिव राकेश शर्मा र सदस्यहरुमा सन्तोष […]
बेनीमा जेसीज कप फुटबल प्रतियोगिताको १९ औं संस्करण सुरु (फोटो)
विकल्प न्यूज/बेनी मंसिर २२ गते । सदरमुकाम बेनीमा बुधबार देखि १९ औं जेसिज कप फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । अन्तरमावि नमस्ते ट्रेड होटल याक जेसीज कप फुटबल प्रतियोगितामा जिल्लाभरबाट २१ विद्यालयको सहभागिता रहेको जेसिजका अध्यक्ष विरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगिता मंगलबार उद्घाटन गरिएको थियो । प्रतियोगिता मंसिर २५ गतेसम्म संचालन हुने छ । […]
विकल्प न्यूज/बेनी मंसिर १७ गते । म्याग्दीको प्रशिद्ध गलेश्वरधाममा बालाचतुदर्शीका दिन (आज) सदवीज छर्ने भक्तजनहरुको चहलपहल देखिएको छ । कोरोना महामारीका लामो समय देखि सुनसान बनेको मन्दिरमा आज भने भक्तजनको चहलपहल भएको हो । सतवीज छर्न म्याग्दीका साथै बागलुङ,पर्वत लगायतका जिल्लाहरुबाट भक्तजनहरु आएका छन् । त्रयोदशीका बिहीबार बेलुकीदेखि दिवङ्गत पितृका नाममा अखण्ड दीपदान गरी बसेका […]
विकल्प न्यूज/बेनी मंसिर १६ गते । स्थानीय जातका गाईको सरक्षण गर्न पर्वतको जलजला गाउँपालिका ७ धाइरिङमा गौशाला स्थापना गरिएको छ । लोपहुँदै गएको स्थानीय जातका गाईको संरक्षण गौशाला स्थापना गरिएको हो । गौशालामा हाल स्थानीय जातका ३२ वटा गाईहरु छन् । गण्डकी गोपाल गौशालाले दुईवर्ष अघि नेपालमै पहिलो पटक गौ महोत्सव आयोजना गरेको थियो । […]
कांग्रेस म्याग्दीको अधिवेशन : मतगणना सुरू
विकल्प न्युज/ बेनी म्याग्दी, ३ कात्तिक । काँग्रेस म्याग्दीको सातौ जिल्ला अधिवेशनमा उप सभापती , सचिव, सहसचिव लगायत कार्य समिती र महाधिवेसन प्रतिनिधि चयनको लागी भएको मतदानको मतगणना सुरु भएको छ । मतदानमा कुल ७३५ मतदातामा ७१२ मत खसेकाे छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि वाट मतगणना सुरू गरीएको छ । नेपाली कांग्रेस म्याग्दीको सातौ जिल्ला अधिबेशन […]
कांग्रेस म्याग्दीको सातौं जिल्ला अधिबेशनमा निर्बिरोध नभएका पदमा मतदान सुरु (फोटो/भिडियो)
विकल्प न्यूज/बेनी मंसिर २ गते । नेपाली कांग्रेस म्याग्दीको सातौ जिल्ला अधिबेशन अन्तरगत सर्वसम्मत नभएका पदमा मतदान सुरु भएको छ । अधिवेशनमा समापतिमा खमबहादुर गर्वुजा सर्वसम्मत भएपनि उपसभापति, सचिव, सह-सचिव र महाधिवेशन प्रतिनिधि लगायतका पदमा मतदान मार्फत टुंगो लगाउन लागिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस म्याग्दीको सातौं जिल्ला अधिवेशन सुरु (फोटो\_भिडियो)
विकल्प न्यूज/बेनी मंसिर १ गते । नेपाली काँग्रेस म्याग्दीको आगमी नेतृत्व चयनका लागि बेनीमा सातौं जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको छ । अधिवेशन सुरु हुनभन्दा पहिला बेनीमा काँग्रेसले बाजागाज सहित ¥याली निकालेको छ ।
खाेपका लागि लामवद्द सर्वसाधारण(फाेटाे)
विकल्प न्युज/ बेनी कार्तिक २९ गते । काेराेना विरूद्दकाे खाेप लगाउन बेनी अस्पताल मा रहेकाे खाेप केन्द्रमा लामवद्द सर्वसाधारणहरू । खाेप लगाउन अस्पतालमा सयौंको संख्यामा सर्वसाधारणको लामाे लाईन लागेकाे छ । १८ वर्ष भन्दा माथिका सवै नागरिकका लागि २२ हजार ६०० सय डाेज खाेप आएकाे स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख एकनारायण लम्सालले बताउनुभयाे । जिल्लाका सवै […]
पर्वत बेनी स्थित राजमार्गको हालत ! सडक बनाउने निकाय कहाँ छ ?
विकल्प न्यूज/बेनी कात्तिक २४ गते । बेनी – मालढुङ्गा सडक अन्तर्गत पर्वतको जलजला वडा नम्बर ३ पर्वत बेनी स्थित पहिरोमा सडक भत्किएको तिनहप्ता भइसकेको छ । जसका कारण सडक साघुरो बनेको छ । दैनिक सयौंको संख्यामा सवारीसाधनहरु जोखिम मोलेर आवतजावत गरेका छन् । सडक भत्किएका कारण यो स्थानमा पैदल यात्रीलाई समेत आवतजावतमा समस्या भएको छ । […]
मनै लोभ्याउने सयपत्री फूलको खेती(फोटोफिचर)
ठाकुरप्रसाद आचार्य/म्याग्दी कात्तिक १८ गते । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका ४ सिंगामा हरियाली ग्रुपले सयपत्री फूलको खेती गरेको छ । करिब ४ रोपनी जमिनमा फुल खेती गरेको हरियाली ग्रुपका सञ्चालक शेरबहादुर केसीले बताउनुभयो । तिनवर्ष देखि व्यवसायीक रुपमा फुलको खेती गर्दै आएको र वार्षिक रुपमा ४ लाख रुपियाँ बराबरको फुल विक्री हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । […]
बेनीमा देउसी भैलोको रौनक सुरु (फोटोफिचर)
विकल्प न्यूज/बेनी कात्तिक १७ गते । राष्ट्रिय पर्व तिहारको अवसरमा सिंगै बेनीबजार देउसी भैलोमय बनेको छ । विभिन्न संघसंस्थाहरुले बजारमा देउसी भैलो खेल्न थालेका छन् ।